किन केही मानिसहरु साह्रै “भाग्यमानी” हुन्छन्? यस्ता छन् कारणहरु !
किन केही मानिसहरू साह्रै भाग्यमानी हुन्छन्?
तपाईंले आफैलाई यी प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ भने एक पटक पुन: सोच्नुस्। “मानिसहरूले राम्रो हुन् वा नराम्रो आफ्ना भाग्य आफै कोर्छन्,” मनोविज्ञ रिचर्ड वाइजमन भन्छन्। वाइजमनले भाग्यको भूमिका र मानिसहरूको जीवनमा त्यसले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरिराखेका छन्। उनले त्यसलाई ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान’ भनेका छन् जसले आफूलाई भाग्यमानी र भाग्यमानी नभएको ठान्नेहरूबीचको भिन्नता हेरिराखेको छ ।
निष्कर्ष के त?
भाग्य कुनै जादुयी क्षमता वा अप्रत्यासित नतिजा नभइ यो हामी कसरी सोच्छौँ र काम गर्छौँ भन्ने हो।खासगरी, भाग्यमानी भनिने वा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने मानिसहरूले यी चार कुरा ठिकसँग गर्छन्।
आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने मानिसहरू सही समय पहिचान गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्छन्। जब उनीहरूले अगाडि नयाँ बाटो देख्छन्, खुशी साथ त्यस बाटोमा हिँड्छन्। भाग्यले साथ नदिएको ठान्नेहरूका हकमा भने त्यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, वाइजमन भन्छन्। “उनीहरू एउटै बाटोमा हुन्छन्। जसकै कारण अवसरहरू देखिए पनि उनीहरू त्यसको सदुपयोग गर्न डराउँछन्।”
अर्कोतर्फ आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरू स्वभावैले धेरै गहिरिएर परिस्थितिको समीक्षा गर्छन्। जुन उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक भइदिन्छ। वाइजमन भन्छन्, “उनीहरूका काम सफल हुनका लागि धेरै समय लाग्छ र उनीहरूको सोचाई धेरै फलदायी समेत भएको पाइँदैन।”
सधैभरी यसले काम गर्छ भन्ने छैन तर सकारात्मक सोचले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि गतिशील भइरहन भने सघाउँछ। यो गुणको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि त्यसले अरू मानिसहरूलाई सहजै आकर्षित गर्छ। आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरूमा भने निराशावादी सोच हावी भइदिन्छ। वाइजमनका अनुसार ‘आफ्ना उदास शैलीका कारण मानिसहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पञ्छिन खोज्छन्।’
यस स्वभावको साँचो भनेको सकारात्मक रहनु हो। नराम्रा कुराहरू सबैको जीवनमा घट्छन् तर भाग्यमानी मानिसहरू यस्तै अनुभवले त्यस्ता परिवेशमा काबु पाउन सक्छन्। उनीहरू त्यस्तो परिस्थिति बुझेरै अगाडि बढ्छन्। यसले खराब समयलाई पनि राम्रोमा परिणत गर्छ। तर आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरू स-साना नकारात्मक कुराबाटै चिन्तित हुन्छन्। उनीहरू भविष्य बेरङ्गको हुँदैछ भन्ने सोचेर पर्यत्न गर्नु नै बेकार रहेको ठान्छन्।
रिचर्ड वाइजमन भन्छन्, केही तरिका अपनाइयो भने जोकोही भाग्यमानी मानिसजसरी सोच्न र व्यवहार गर्न सक्छन्। त्योमध्ये एउटा ‘भाग्य डायरी’ बनाउनु र आफूलाई भाग्यमानी सोच्न थाल्नु पनि हो। “जेजस्तो भए पनि आफूमा घटेका सबैभन्दा सकारात्मक वा राम्रो कुरा के हो, त्यो लेख्नुहोस्।”
यसले नकारात्मकता हटाएर जीवनका सकारात्मक पक्षमा केन्द्रित हुन सघाउँछ। हामीसँग हुने कतिपय घटना हाम्रो बसमा हुँदैनन् तर ‘भाग्य डायरी’ बनाउँदा हामीले त्यस्ता अवस्थासँग कसरी जुझ्ने भन्ने सिक्छौँ। त्यो रातारात भइहाल्ने कुरा होइन, वाइजमन भन्छन्, “तर केही हप्तामै मानिसमा यसको साँच्चिकै असर पर्न थाल्नेछ।”
* सफलता के हो ? सफलता कसरी हासिल गर्ने ?
सामान्यतया मानिसहरुले धनसम्पति कमाउनु, नोकर चाकर राख्नु र अरुलाई आफ्नो पक्ष र वशमा राख्नुलाई सफलता ठान्दछन । तर सफलता यो भन्दा धेरै भिन्न कुरा हो । माथी इड्विन सी. ब्लिसले भनेझै सफलता भनेको लडाईमा विजय पाउनु मात्र होइन, सिङ्गो युद्ध जित्नु हो । यहाँ हामीलाई लडाई र युद्धमा के फरक छ भन्ने कुरामा अलमल नहोस भनेर यी दुई बीचको फरक छुट्याउन आवश्यक ठान्दछु ।
तर कौरबहरुले कयौ पटक जित्ता जित्तै पनि अन्ततः समग्र युद्ध ऊनीहरुले हारे र पाण्डबहरुले जिते ।
अनि कौरबहरुको अस्तित्व बिलाएर गयो र पाण्डबहरु आजसम्म पनि सत्यको जितको प्रतिक बनेर रहिरहेका छन । हो यो घटनाबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि लडाई भनेको एउटा अंश वा टुक्रा हो भने युद्ध भनेको पुर्ण भाग हो । भन्नुको मतलव के हो भने हामी मानिस पनि आफ्नो जीवनका स-साना प्राप्तिलाई नै सफलता ठान्छौ र त्यहि साना कुराको पछि लागिरहन्छौ ।
जस्तो कि हामीलाई जीवनमा पैसा कमाउनु , घर बनाउनु , जागिर खानु र मान्छेलाई आफ्नो पक्ष र वशमा पार्नुलाई नै
त्यसो भए के हो त सफलता ?
अब हामी गम्भिरतापूर्वक मनन गरौ । माथिका सन्दर्भहरु नियालौ । जस्तो कि पाण्डबहरुले सारा सम्पति जुवाको नाममा गुमाउनु पर्यो, १२ बर्षसम्म बनवास र गुप्तबासको सामना गर्नु पर्यो । कहिले बिष त कहिले आगोको नियोजित सामना गर्नु पर्यो ।
लडाई जितेको भ्रमले युद्ध जितिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।
तर कहिल्यै त्यस्तो हुदैन किनकि धेरै लडाई जितेर पनि युद्ध हार्न सकिन्छ तर युद्ध जितिने निश्चित छ भने लडाई हारेर पनि केहि हुदैन । त्यसैले युद्ध जितिने निश्चित हुने खालका प्रयास गर्नुहोस – सफलता तपाईकै हातमा हुनेछ ।
१६. काममा जोखीम हुन्छ नै । तर, राम्ररी सम्झीबुझी जोखीम उठाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
१७. कुनै पनि कम्पनी, करीअर वा परियोजनाको थालनी गर्दा शुरुआती अवस्थामा धेरै परिस्थितिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नत्र तपाईं आत्तिएर बीचैमा हताश हुने सम्भावना बढ्छ ।
१८. काममा नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यक पनि छ । ती प्रतिक्रियाभित्र लुकेका सत्य कुरालाई आत्मसात् गर्दै सुधारको प्रयास गर्नुपर्छ । भित्रभित्रै मन खियाएर बस्नु मूर्खता हो ।
१९. आफूले कुनै कामप्रति कमेण्ट गर्दा व्यक्तिमाथि आक्षेप हुने गरी प्रस्तुत नहुनुुहोस् ।
२०. ठूलो कुरा सोच्नुहोस्, ठूलै सपना देख्नुहोस्, तर जीवन सधैं साधारण रोज्नुहोस् ।
२१. आफ्ना सपनालाई लक्ष्यका रूपमा अघि बढाउनुहोस् ।